भोलि टीकाको साइत बिहान १० बजेर २ मीनेटमा,अन्यत्र कति बजे ? « Jana Aastha News Online
भोलि टीकाको साइत बिहान १० बजेर २ मीनेटमा,अन्यत्र कति बजे ?
प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७८, बिहीबार २०:३०
भोलि विजया दशमीको टीकाको शुभ साइत बिहान १० बजेर २ मीनेट रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । नेपालमा भोलि सोही समय मान्यजनको हातबाट टीका लगाइन्छ । तर,नेपालको टीकाको समय अन्यत्र चाहिँ कति बजे हुन्छ ?